Harry Laurent Rahajason : “Mpitady vola amin’ny asan-gazety ny MLE” -
AccueilRaharaham-pirenenaHarry Laurent Rahajason : “Mpitady vola amin’ny asan-gazety ny MLE”
17/01/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Manoloana ny vaovao tsy marina izay naelin’ ny MLE mikasika ilay resaka AMETIS na ny visa eny amin’ny seranam-piaramanidina , dia nivoaka tamin ny fahanginany ny minisitry ny Serasera Harry Laurent Rahajason omaly. Nambaran’ity minisitry ny Serasera ity fa tsy marina ny vaovao izay navoakan’ ireo gazety izay mivondrona anatin’ny MLE, ary lasa fanaratsiana sy fanakorontanana saim-bahoaka izany. Araka ny fanazavana sy ny tohan-kevitra izay nentin’ny minisitry ny Serasera dia mbola tsy niasa io AMETIS etsy amin’ny seranam-piaramanidina io, noho izany dia tsy nisy mihitsy ny resa-bola niditra sy nivoaka. Noho izany dia nilaza mazava ny minisitra, Hary Laurent Rahajason fa “ izao dia mampirisika ny MLE hamita hatramin’ny farany ny fanadihadiana lalina izay ataon’ izy ireo, ka raha tsy marina ny vaovao navoakan’izy ireo dia misy ny lalàna mifehy izany”. Noho izany dia tsy manaporofo izao fomba fiasan’ny MLE izao hoy ny minisitry ny Serasera fa “ tsy araka ny niheverena azy hoe efa matihanina amin’ny asa fanaovan-gazety ireo mpikambana vitsy an’isa anatin’ny MLE , satria tsy manao ilay fanamarinam-baovao. Izy ireo rahateo dia efa mifampilahatra amin’ireo mpanao politika fa tsy mpanao gazety intsony” hoy hatrany ny minisitry ny Serasera sy ny fifandraisana amin’ ny andrim-panjakana.
Manoloana izay tsy fanaovan’izy ireo gazety intsony izay dia rariny tokoa hoy ny minisitra Hary Laurent Rahajason raha toa ka tonga any amin’ny fitsarana ny raharaha, satria dia eo ny fanaratsiana olona be fahatany sy fanakorontanana saim-bahoaka. Notsiahivin’ny minisitra tokoa mantsy ny fihetsika izay navoakan’i Lalatiana Rakotondrazafy fony nisy ny fifosana azy tamin’ ny tambazotra, izay nampigadra mpanakanto iray izay mpitantana io kaonty facebook io. Noho izany hoy ny minisitra dia rariny loatra raha toa ka misy ny fitoriana hapetraka satria rehefa nahatsiaro voadona i Lalatiana Rakotondrazafy tamin’ ny fanaratsiana azy ireo, dia rariny loatra ihany koa ny olona haratsian’izy ireo raha hitory eny amin’ ny fitsarana hoy ny minisitry ny Serasera raha nivahiny tao amin’ny haino aman-jery iray.
Nivoaka ihany koa ny marina omaly mikasika ny MLE raha nitondra fanazavana ny minisitry ny serasera Hary Laurent Rahajason, mikasika ilay hetsika izay nataon’ ny MLE tamin’ izany fotoana nandritra ny hetsika nampitondrain’ izy hoe “fandevenana ny fahalalahana”. Nambaran’ ny minisitra àry fa rehefa maro be ireo mpanao gazety tonga tetsy Ankorondrano izay nanaraka ny hetsika, dia tsy hita tampoka ireo mpitarika, ry Lalatiana Rakotondrazafy sy ry Fetra satria nisy ny vola izay noraisin’ izy ireo. Gaga teo noho izany ireo mpanao fihetsiketsehana, satria efa mandina ny molotr’izy ireo. Nampiasain’ireo mpitarika noho izany ireo mpanao gazety izay nandeha ampahatsorana, kay dia fitadiavam-bola ranoray no antony. Mazava mihitsy aza ny fanazavana izay nentin’ny minisitry ny Serasera fa fitadiavam-bola no antom-pisian’ ny MLE sisa, satria dia efatra monja izy ireo no mpikambana taorian’ ny nahalalan’ ny mpanao gazety fa izay tokoa no antom-pisian’ ireo. Rah marina izany fanazavana izay nentin’ny minisitra izay, satria inona no tsy nieran’izy ireo tamin’ny mpanao gazety rehetra amin’ny hamoahana iny lahatsoratra mikasika ny AMETIS iny raha mbola mihevitra izy ireo fa mbola mpikambana avokoa ny rehetra.
Noho io famoahana ny marina nataon’ny minisitry ny Serasera io, dia maro ireo mpanao gazety no tohina, ary tsy faly amin’ny fomba fanaon’ny MLE .
7 Febroary-NATAON-DRAJOELINA SORONA NY MADINIKA
Nomelohan’ny Fitsarana HAT higadra mandra-pahafatiny noho ny raharaha 7 Febroary ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nampitifitra mpanao fihetsiketsehana no heloka niampangana azy. Isan’ny voaheloka tamin’izany koa ny jeneraly Raoelina ary ireo mpiambina ny lapam-panjakana ...Tohiny
Fisavana ny tranon’i Mbola Rajaonah : Niasa malalaka ny BIANCO
SADC : Manohana ny Fitondrana sy ny vahoaka malagasy
Filoha Hery Rajaonarimampianina : Nanohana ny ezaka nataon’ i Père Pedro